UKUBA sinokufa, ngaba uThixo ebengathanda ukusivusa, okanye asibuyisele ebomini?— Indoda elungileyo uYobhi yayikholelwa ukuba uThixo wayethanda ukwenjenjalo. Ngoko xa uYobhi wayecinga ukuba sele eza kufa, wathi kuThixo: “Uya kubiza, ndisabele.” UYobhi wathi uYehova uThixo wayeya kukulangazelela, okanye akuthande gqitha ukumvusa.​—Yobhi 14:14, 15.
UYesu uyafana noYise uYehova uThixo. UYesu uyathanda ukusinceda. Xa enye indoda eyayineqhenqa yathi kuye, “ukuba nje uyathanda, unako ukundenza ndihlambuluke,” uYesu wayiphendula wathi: “Ndiyathanda.” Yaye wayiphilisa loo ndoda kwelo qhenqa layo.—Marko 1:40-42.
UYehova wabonisa njani ukuba uyabathanda abantwana?
UYesu wakufunda kuYise ukuthanda abantwana. Kude kudala ngaphambili, kangangezihlandlo ezibini, uYehova wasebenzisa abakhonzi bakhe ukuze bavuse abantwana. UEliya wacela uYehova ukuba avuse unyana webhinqa elamenzela ububele. Yaye uYehova wakwenza oko. UYehova waphinda wasebenzisa umkhonzi wakhe uElisha ukuze avuse enye inkwenkwana.​—1 Kumkani 17:17-24; 2 Kumkani 4:32-37.
Ngaba akukuvuyisi ukwazi ukuba uYehova usithanda ngolo hlobo?— Akasikhumbuli nje kuphela ngoxa siphila. Uya kusikhumbula naxa sifile. UYesu wathi uYise ubagqala njengabaphilileyo kwanabo bafileyo abathandayo! (Luka 20:38) IBhayibhile ithi ‘ukufa, ubomi, iingelosi, urhulumente, izinto ezikhoyo nezinto ezizayo, azinako ukusahlula eluthandweni lukaThixo.’​—Roma 8:38, 39.
Xa uYesu wayesemhlabeni, wabonisa ukuba uYehova ubakhathalele abantwana abancinane. Khumbula ukuba uYesu wazipha ithuba lokuthetha nabantwana ngoThixo. Kodwa ngaba ubusazi ukuba uThixo wanika uYesu amandla okuvusa abantwana ekufeni?— Makhe sithethe ngokuvusa kukaYesu intombazana eyayineminyaka eli-12 ubudala yenye indoda egama linguYayiro.
UYayiro nowakwakhe bahlala nomntwana okuphela kwakhe, kufutshane noLwandle lwaseGalili. Ngenye imini le ntombazana igula gqitha, kangangokuba uYayiro uyaqonda ukuba iza kufa. Ucinga ngoYesu, indoda eyenza imimangaliso aye weva ukuba iyabaphilisa abantu. Ngoko uYayiro uyahamba aye kumkhangela. Umfumana uYesu ekunxweme loLwandle lwaseGalili, efundisa abantu abaninzi.
UYayiro uphumela phakathi kweso sihlwele aze aguqe phambi kukaYesu. Uthi kuYesu: ‘Intombi yam encinane igula gqitha. Ngaba ungeza ukuze uyincede? Ndicela uze.’ Ngoko nangoko uYesu uhamba noYayiro. Eso sihlwele sasize kubona uMfundisi Omkhulu naso siyalandela. Kodwa emva kokuba sele behambe umgama, kufika amadoda aphuma emzini kaYayiro aze athi kuye: “Intombi yakho ifile! Usamkhathazelani na umfundisi?”
UYesu uyaweva la madoda njengoko ethetha oku. Uyayazi indlela abuhlungu ngayo uYayiro ngokuphulukana nomntwana okuphela kwakhe. Ngoko uthi kuye: ‘Musa ukoyika. Yiba nokholo kuThixo, yaye intombi yakho iza kuphila.’ Baqhubeka behamba de bafike emzini kaYayiro. Apha bafika izihlobo zaloo ntsapho zilila. Zikhathazekile kuba umhlobo wazo omncinane ufile. Kodwa uYesu uthi kuzo: ‘Musani ukulila. Lo mntwana akafanga kodwa ulele.’
Xa uYesu ethetha oku, abantu bayamhleka, kuba bayazi ukuba ifile le ntombazana. Ngoko ucinga ukuba kutheni uYesu esithi ilele nje? Ucinga ukuba sisiphi isifundo afuna ukusifundisa aba bantu?— Ufuna bazi ukuba ukufa kufana nobuthongo obunzulu. Ufuna ukubafundisa ukuba ngamandla kaThixo unokumvusa umntu ofileyo kanye njengokuba sinokukwazi ukuvusa umntu oleleyo.
Sifunda ntoni ekuvuseni kukaYesu intombazana kaYayiro?
UYesu ucela wonke umntu okuloo ndlu ukuba aphume, ngaphandle kwabapostile bakhe, uPetros, uYakobi, noYohane kwakunye nabazali bale ntombazana. Wandula ke angene kule ndawo inalo mntwana. Umbamba ngesandla aze athi: ‘Ntombazana, vuka!’ Yaye ngoko nangoko iyaphakama ize iqalise ukuhamba! Abazali bayo bavuya gqitha.—Marko 5:21-24, 35-43; Luka 8:40-42, 49-56.
Khawucingisise ngako oku. Ekubeni uYesu wayivusayo loo ntombazana, ngaba unokwenza okufanayo nakwabanye?— Ngaba ucinga ukuba uya kukwenza ngokwenene?— Ewe, uya kukwenza. UYesu wathi: “Liyeza ilixa ekuya kuthi ngalo bonke abo bakumangcwaba enkumbulo balive ilizwi [lam] baze baphume.”​—Yohane 5:28, 29.
Ngaba ucinga ukuba uYesu uyathanda ukuvusa abantu?— Omnye umzekelo oseBhayibhileni usinceda sikwazi ukuphendula loo mbuzo. Okwenzeka kwisixeko saseNayin kubonisa indlela avakalelwa ngayo uYesu ngabantu abasentlungwini xa kungcwatywa.
Elinye ibhinqa liphakathi komngcelele osuka eNayin ukuya kungcwaba unyana walo. Umyeni walo ebesandul’ ukufa yaye ngoku kufe okuphela komntwana walo. Hayi indlela elikhathazeke ngayo! Uninzi lwabantu baseNayin luyalandela njengoko unyana walo ekhutshelwa ngaphandle kwesixeko. Eli bhinqa liyalila yaye akukho nto banokuyenza abantu ukuze balithuthuzele.
Ngale mini, uYesu nabafundi bakhe basendleleni eya ngakwisixeko saseNayin. Ngakwisango lesixeko, badibana nesihlwele esiye kungcwaba unyana weli bhinqa. Xa ebona eli bhinqa lililayo, uYesu uyalisizela. Ukukhathazeka kwalo kumchukumisa gqitha. Ufuna ukulinceda.
Ngoko ngovelwano kodwa ngendlela eqinisekisayo nelenza liphulaphule, uthi: “Musa ukulila.” Indlela athetha nenza ngayo yenza wonke umntu owayelapho abukele ngomdla. Njengoko uYesu esiya kweso sidumbu, bonke bamele ukuba bayazibuza ngoko aza kukwenza. UYesu uyalela ngelithi: “Mfana, ndithi kuwe, Vuka!” Ngoko nangoko, iyavuka! Yaye iqalisa ukuthetha.​—Luka 7:11-17.
Cinga nje ngendlela elavakalelwa ngayo eli bhinqa! Wena ubuya kuvakalelwa njani xa usamkela umntu omthandayo ovuka ekufeni?— Ngaba oku akubonisi ukuba uYesu ubathanda ngokwenene abantu yaye uyathanda ukubanceda?— Cinga nje ngendlela ekuya kuvuyisa ngayo ukwamkelela abantu ebomini kwihlabathi elitsha likaThixo!—2 Petros 3:13; ISityhilelo 21:3, 4.
Ukuvuswa kokuphela komntwana weli bhinqa kubonisa ntoni?
Ngelo xesha, abanye babantu abaya kuvuswa iya kuba ngabantu esasibazi, kuquka nabantwana. Siya kubazi kanye njengokuba uYayiro wayeyazi intombazana yakhe xa uYesu wayivusayo. Abanye iya kuba ngabantu abafa kumakhulukhulu okanye kumawakawaka eminyaka eyadlulayo. Kodwa uThixo akasayi kubalibala, kuba nje babephila kudala.
Ngaba akuvuyisi ukwazi ukuba uYehova uThixo noNyana wakhe, uYesu basithanda ngolo hlobo?— Abafuni siphile nje kangangeminyaka embalwa, kodwa bafuna siphile ngonaphakade!
Ukuba ufuna ukufunda eBhayibhileni ngethemba elivuyisayo ngokuphathelele abantu abafileyo, nceda ufunde uIsaya 25:8; IZenzo 24:15 neyoku-1 kwabaseKorinte 15:20-22.